Xaafada Calanleey ee magaalada Kismaayo oo dil loogu gaystey Nin lagu sheegey inuu ahaa Ganacsade – idalenews.com
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa habeennimadii xalay waxaa lagu dilay ganacsade kamid ahaa ganacsatada magaalada, ayadoona dilka ay geysteen rag hubeysan oo aaanan heybtooda la aqoonsan.
Labo ruux oo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa habeennimadii xalay xaafada Calaley ee magaalada Kismaayo gaar ahaan halka lagu magacaabo Dalcadda ku dilay ninkani ganacsatada magaalada kamid ahaa, ayadoona toogashada kadib la sheegay in raga dilka geystay ay goobta ka baxsadeen.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in raga toogasha geystay ay ninka ganacsada ah meyd ahaan uga tageen hayeeshee dhaawac halis ah oo soo gaaray kadib uu Isbitaalka ugu geeriyooday.
Saraakiisha ciidamada amaanka ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay ka warhayaan dilka ayna ku raad joogaan raga dilka geystay sida ay hadalka u dhigeen.
Magaalada Kismaayo oo dhawaan ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeyay labo garab oo magaalada isku haya ayaa habeennadii u dambeeyay waxaa ku soo kordhay dilalka qorsheysan oo inta badan lala eeganayo ganacsatada magaalada, ayadoona goobta habeennimadii xalay dilka uu ka dhacay ay tahay halkii uu ka dhacay dagaalkii qaraaraa ee ay isaga soo horjeedeen dhinacyada isku haya Kismaayo.